तिथि मेरो पत्रु » जोडे लागि पशु-मैत्री शौक
द्वारा दिदी Sheridan
जोडे लागि पशु-मैत्री शौक
तपाईं भाग्यशाली - तपाईं पाएका छौं चलचित्र को आफ्नो प्रेम साझा जो अचम्मको कसैले, हास्य को महान भावना छ, र जनावर adores. तपाईं मिति रात विचार बाहिर चलाइराख्नु र हरेक रोमान्टिक outing खोज्नुभयो भने, किन दम्पतीको रूपमा केही परोपकार सुरु छैन, यो सोख समावेश विशेष गरी यदि तपाईं पहिले नै आनन्द उठाउन? यहाँ तपाईं बाहिर मदत गर्न सक्छ तरिकामा केही विचारहरू छन्, सबै आफ्नो साथी को सहायता:
1.) फोटोग्राफी: दखल गर्नू shelters र छुटकारा oftentimes ग्रहण लागि उपलब्ध आफ्नो वर्तमान जनावरहरूको मद्दत कब्जा गुणस्तर फोटो आवश्यक. तपाईं वा तपाईंको साझेदार इन्स्टाग्राम एक मास्टर हो, वा तपाईं इन र अन्तर को बहिष्कार व्याख्या गर्न प्रेम गर्न? यो तपाईं को लागि एक महान फिट हुन सक्छ, र यो सजिलै जनावरहरूको संख्या मा फरक अपनाए भइरहेको बनाउन सक्छ. हेर्न आफ्नो आश्रय सम्पर्क तपाईं आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्छन् भने, र तिनीहरूलाई घर भेट्टाउन मदत सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा ती प्यारा अनुहार साझा.
2.) सफाई: अव्यवस्था को बिरामी? यो धेरै कुराहरू एक जोडी रूपमा जम्मा गर्न त सजिलो छ, त्यसैले घर सफा र स्थानीय shelters र छुटकारा आवश्यक वस्तुहरू प्रदान गर्न मौका. तौलिया, ओछ्याउने, समाचार पत्र, व्यञ्जन, placemats, र थप सबै यी समूहहरूमा उपयोगी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरूलाई एक कल दिन, र तिनीहरूले के आवश्यक छ हेर्न. तपाईं आफ्नो घर थप संगठित बनाउने बेला आपूर्ति बाहिर तिनीहरूलाई मदत छौँ.
3.) पाक कला: बाहिर काटन मासु र / वा पशु उत्पादन आफ्नो भोजन अप सँगै liven गर्न सक्नुहुन्छ. जे-Z र Beyonce यसलाई गरे, किन छैन तपाईं? शाकाहारी र शाकाहारी आफ्नो मनपर्ने व्यञ्जन मा लिन्छ पिज्जा रात सम्म थप रोचक बनाउन सक्छ, र यो जीवन शैली नयाँ पाक स्वाद र रेस्टुरेन्ट साहसिक तरिका दिन्छ. पशुहरू लागि यो गर्न, आफ्नो स्वास्थ्य को लागि, वा आफ्नो डिनर मा थप उत्पादन समावेश बस. कुनै पनि तरिका, र स्वादिष्ट - यो लाभदायक छ!
4.) यात्रा: तपाईं को दुई सडक मार माया गर्छन्? आफ्नो इच्छा सूची मा यात्रा छ, तर तपाईं यो के गर्न लाग्न कहिल्यै? धेरै shelters र छुटकारा आफ्नो स्थानहरु र अन्य छुटकारा वा पालुङ्गो घरमा बीच transports आवश्यक. तपाईं जसरी शहर बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने, वा तपाईं सधैं राज्य अर्को भाग हेर्न चाहन्थे छु भने, जनावरको ओसार्न प्रदान, यो बाटो को बस एक भाग हो भने पनि.
5.) कला र शिल्प: दुवै यदि तपाईं DIY परियोजनाहरु प्रेम के (उपकरण संग ध्यान सबै Pinterest प्रेमी र मान्छे,) त्यसपछि यो तपाईं को लागि रमाइलो परियोजना हो. केही वस्तुहरू र केही सामुहिक संग, तपाईं सजिलै संग आफ्नो समुदायमा आवारा जनावर लागि चिसो मौसम shelters वा कुकुर घरहरू निर्माण गर्न सक्छन्. यो पनि सम्बन्ध लागि एक महान परीक्षण छ, IKEA खरिद जस्तै धेरै. तपाईं दुवै कला प्रेम भने, सँगै केही टुक्रा सिर्जना र बन्द नीलामी एउटा जनावर nonprofit तिनीहरूलाई दान वा जानकारी हुर्काउने प्रयोग.
6.) कम्प्युटर: तपाईं प्रविधी-प्रेमी हुनुहुन्छ भने, आफ्नो वेबपेज डिजाइन वा सामाजिक सञ्जाल साइटहरू संग छुटकारा वा shelters मदत गर्न प्रस्ताव. तपाईं blog भने, यी समुदाय स्रोत केही लेख लेख्न, वा तिनीहरूको आफ्नै ब्लग फारम मदत.
7.) सामाजिकता: म केन्टकीमा नर्सिङ होममा काम, र म सबै भन्दा बासिन्दा धेरै आगंतुकों प्राप्त छैन तपाईं आश्वस्त गर्न सक्छन्. तपाईं काम को यस लाइन को लागि सही व्यक्तित्व छ कि एक पाल्तु जनावर छन् भने, स्वयं लागि आफ्नो पाल्तु जनावर तयार रही प्रक्रिया सुरु गर्न एउटा पशु चिकित्सा समूह कुरा. हामी सबै थाहा पशु अन्तरक्रिया कसरी सान्त्वना, किन सान्त्वना चाहिएको कसैले गर्न भनेर प्रस्ताव छैन? घरेलु हिंसा shelters यी सेवाहरू भेटी विचार, पालुङ्गो बच्चाहरु, र धर्मशाला विरामीहरु, पनि. लाग्छ मात्र बिरालोहरु र कुकुर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ छैन, या त! म bunnies देखेका छौँ, सुंगुर, र पनि कछुवा सबै आफ्नो भाग गरेर!
8.) खेल: तपाईं र तपाईंको जानेमन सक्रिय रहन प्रेम भने, पशु क्रूरता मा जागरूकता हुर्काउने व्यवस्थित र एक 5K मा सहभागी विचार, वा स्थानीय ग्रहण कार्यक्रम मा कुकुर हिंड्न प्रस्ताव. सायद पनि एक पिल्ला आफ्नो स्थानीय दयालु समाज लाभ उठाउन "दौड" वा बिल्ली को बच्चा Superbowl पाहुना. रमाइलो भइरहेको बेला तपाईं आफ्नो प्रयासमा परोपकारी मद्दत गर्नेछौं, र एक जीत-जीत हो.
9.) मा रहनु: हाम्रो पशु स्याहार सधैंभरि घरमा चाहिन्छ भनेर कुकुर र बिरालोहरु भरिएका छन्, र उद्धार समूह तुरून्त euthanasia रोक्न क्रममा यी पशुहरू लागि fosters आवश्यक. तपाईं एक homebody हुनुहुन्छ र अस्थायी रूपमा जनावरको बढावा गर्न अतिरिक्त स्थान छ भने, आफ्नो स्थानीय पशु shelters र उद्धार समूह सम्पर्क. जीवन सुरक्षित भन्दा राम्रो के र एक नयाँ पोस्तीन मित्र खेल्न रही?
दम्पतीको रूपमा यी परोपकारी सोख Enjoy, र तपाईं वरिपरि जनावरहरूको जीवनमा भिन्नता बनाउने छौं कि सँगै थाह.
8 तपाईं सोध्नुपर्छ महान् पहिलो तिथि प्रश्न
मा चुम्बन गर्न कसरी5सजिलो कदम
कुकुर मा Katz : कुकुर संग प्रशिक्षण र रहन गर्न एक: सामान्य गाइड